पोखरामा १३ औं सागका प्याराग्लाइडिङसहित ७ खेल हुन सक्ने ! | Hamro Khelkud
पोखरामा १३ औं सागका प्याराग्लाइडिङसहित ७ खेल हुन सक्ने !
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– एसियाली खेलकुदमा नेपालका लागि एक मात्र पदक जित्ने प्याराग्लाइडिङसहित पोखरामा १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का ७ खेल हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
छलफलमा सहभागीहरु ।
गत वर्ष इन्डोनेसियामा भएको एसियाली खेलकुदमा नेपालका लागि प्याराग्लाइडिङ टोलीले रजत पदक जितेको थियो । त्यसमा नेपालले जितेको त्यो एकमात्र पदक हो ।
१३ औं साग मंसिर १५ देखि २४ गते सम्म नेपालमा हुने तय भएको छ । काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा विभिन्न खेल आयोजना हुने बताइएको छ । यद्दपी आधिकारिक रुपमा कुन खेल कहाँ हुने अझै सार्वजनिक भएको छैन । यसैबीच, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य राजेश गुरुङको पहलमा पोखरामा शनिबार १३ औं साग आयोजना विषयमा छलफल भएको थियो ।
छलफलका क्रममा आर्चरी, प्याराग्लाइडिङ, महिला फुटबल, ह्यान्डबल, भलिबल (महिला), भारोत्तोलन र ट्रायथोलन पोखरामा आयोजना हुन सक्ने सहभागीले बताएका छन् । त्यसका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको राखेप सदस्य गुरुङले जानकारी दिएका थिए ।
छलफलमा जति सक्दो चाडो सचिवालय स्थापना गरेर काम अघि बढाउन सल्लाह दिएको बताइएको छ । नेपाल ह्यान्डबल संघका अध्यक्ष तेज गुरुङ र नेपाल भलिबल संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष यम गुरुङ दुवै पोखरा निवासी भएकाले आ आफ्ना खेल पोखरामा ल्याउनका लागि प्रयारत छन् ।
यदि दुवै खेल पोखरा भएको खण्डमा सागको औपचारिक उद्घाटन अघि नै खेल सुरु गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफलमा चर्चा भएको थियो । दुवै खेल सक्नलाई ६ वा ७ दिन लाग्न सक्ने बताइएको छ । बैठकमा सहभागीहरुले पोखरामा सागका खेल हुनु आफैमा राम्रो भएपनि भौतिक पूर्वधार निर्माण नएका कारण हुनेमा शंका गरेका छन् । त्यसका लागि छिटो काम सुरु गर्नेपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
७ खेल हुने भनिएपनि पोखरा रंगशाला समयमा निर्माण हुनेमा भने शंका छ । अहिले सम्म रंगशालाको नक्सा तयार भइनसकिएको बताएको छ । शुक्रबारको बैठकपछि रंगशाला निर्माण कम्पनीलाई ३ दिनमा दिनमा डिजाइन सक्न निर्देशन दिएको छ । अब पोखरा रंगशालामा प्राकृतिक मैदान नै तयार हुने बताइएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा (सुनार) ले निर्माण कम्पनीलाई कार्तिकको दोश्रो साता सम्म सम्पूर्ण काम सक्ने गरि बैठक भनिएको जानकारी दिए । राखेप सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले बैठकमा पोखरामा १३ औं सागको महिला फुटबल हुने बताएका थिए । कम्पनीले एस्ट्रो तर्फ राख्ने गरि काम अघि बढाएको थियो ।